वलिउड हलिउड सगरमाथा चढेर फर्केकी निशालाई भब्य स्वागत सगरमाथाको आराहण गरी काठमाडौं आइपुगेकी नायिका निशा अधिकारीलाई आज भब्य स्वागत गरिएको छ । कलाकार संघका अधयक्ष नबल खड्का सहितको टोलिले उनलाई विमानस्थलमै पुगेर स्वागत गरेको थियो । जेठ ७ गते सगरमाथाको चुचुरोमा पाईला टेकेकी हुन् । ... .... थप समाचारहरु	जेष्ठमै कात्तिक ! नन्दिताको प्रेममा पल्केर बर्वाद भए गजित झोलेमा दयाहाङ र प्रियंकाको रोमान्स लोकदोहोरी पत्रकारिता पुरस्कार दिइने उदयको जन्मदिनमा सुब्रतको डेब्यू सेती बाढीको डकुमेण्ट्रीको माग बढ्दो रेखाको अंग्रेजी सुपरस्टार मम कति ब्यस्त ! हामीलाई थाहा छ बलिउड स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन सधै ब्यस्त हुन्छिन । कहिले फिल्म सूटिंग त कहिले छोरी (आराध्य) को हेरचाह ! आमाको नाताले पनी छोरीको हेरचाह त गर्ने पर्यो नि की कसो ? एक कार्यक्रममा छोरी संग उपस्थित भयेकी ... .... थप समाचारहरु